Sidee ugu raaxaysan kartaan galmada habeenka arooska? | Raganimo University
Sidee ugu raaxaysan kartaan galmada habeenka arooska?
February 13, 20192 minutes
Galmada habeenka arooska waa mida ugu xiisaha badan ee lamaane kasta ay dareemi karaan balse ma ahan mida ugu macaan ama ugu raaxada badan. Xaqiiqada ayaa ah in galmada bikrada ay tahay tan ugu raaxada yar. In gabadha la bikro jabiyo oo dhiig ka yimaado oo ay xanuun dareento ma ahan mid raggu ay ku raaxaysanayaan. Hadaba maxaad sameyn kartaan si aad ugu raaxaystaan galmada habeenka arooska?
Ha cunina cunto culus
Caloosha oo buuxda kuma fiicna galmadu. Inta iinan bilaabin hawsha ha cunina cunto culus. Haddii qorshahaaga uu yahay in aad waqti badan sariirta ku qaadato oo aadan markasta ku ordin musqusha waxaad iska ilaalisaa cuntada culus iyo biyaha badan galmada ka hor.
Galmadu guud ahaan degdeg iyo cadaadis kuma fiicna, mida arooska iyo gabdhaha bikrada ah waaba ka sii darantahay. Haku degdegin galmada. Hawsha ku biloow raaxada fudud iyo baashaalka hore. Xaqiiji in gabadhu ay dareemayso farxad iyo rabitaan. Meel kasta ka istiimi. Ku biloow shumiska, salaaxa jirka iwm. Waxaa aad muhiim u ah in gabadha bikrada ah ay aad gudaha ugu qoyantahay inta aadan galin guska.
Dhinacee ugu raaxo badan?
Gabadha bikrada ah way ku xanuunsan kartaa galmada ugu horeysa, inkastoo qaarkood aysan ku xanuunsan. Gabdhaha la guday ayaa qaasatan dareemi kara xanuun badan. Marka aad xaqiijiso in gabadhu ay aad u kacsatay oo ay qoyantahay isla markaana diyaar u tahay guskaaga, waa in ay u seexataa dhabarka iyadoo isticmaalaysa barkin aan aad u dheereyn oo lugaha kala fogeynaysa. Iyadoo ay kuu sahlantahay in aad si fudud u dhexgasho lugaheeda isla markaana aad xakameyso xawaaraha guskaaga.
Si degan u gali
Marka ay lugaha kala fogeyso oo aad diyaar tihiin. Si degan u shumi, oo jirkeeda oo dhan intaad soo raacdo waxaad si degan oo aan degdeg ahayn u galisaa guska. Marka aad xaqiijiso in uu afkiisu gudaha u galay isla markaana aad dareemi karto in ay aad u qoyantahay, hal mar oo lama filaan ah ku wada riix. Waxay dareemi doontaa xoogaa xanuun ah, lagana yaabo in ay qayliso gabadhu, waliba uu dhiig ka yimaado, iyadoo taasi ay calaamad u tahay in xuubkii bikrada uu jabay.
Ka dib niyada u dhis oo u sheeg in laga gudbay xanuunkii. Haddii ay gabadhu dareemayso xanuun joogto ah, dhagayso rabitaankeeda. Oo haku adkaysan in aad hawsha sii wadaan. Waqti waad haysataan oo markale ayaad hawsha sii wadi kartaan.